“Real Madrid barri ayey la soo saxiixan doontaa Mbappé haddii ay dhacdo hal arrin” – Florentino Pérez – Gool FM
(Madrid) 01 Juun 2020. Madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid ee Florentino Pérez ayaa si xamaasad leh uga hadlay fikrada uu ku doonayo inuu kula saxiixdo Kylian Mbappé oo si xoogan looga doonayo Madrid.
Daraasad shaaca looga qaaday shabakada “KPMG Network” saacado ka hor ayaa lagu sheegay in qiimaha Kylian Mbappé ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda uu noqday 177 million euros sababa la xiriira Coronavirus.
Haddaba Florentino Pérez ayaa aaminsan in qiimaha lagu sheegay daraasada ay habboon tahay Real Madrid inay ku iibsato Kylian Mbappé, waxaana haddii ay arrinta tahay mid dhab ah inuu u jibin doonaa khasnadaha kooxda si uu u bixiyo lacagta loo baahan yahay si uu ula soo saxixdo xiddiga reer France xagaaga soo socda.
Shabakada (Central Spain) oo si aad ah ugu dhow Real Madrid ayaa sheegtay Isniintii in Florentino Pérez uu kula hadlay gudaha kooxda Los Blancos qaar ka mid ah shaqaalaha isla markaana uu u sheegay inuu la wareegi doono Mbappé haddii qiimihiisa uu gaarayo qiimaha la xusay.
Florentino Pérez ayaan diidi doonin inuu bixiyo 177 million euros si uu u iibsado Kylian Mbappé, madaama ay kooxda horeyba kula soo saxiixatay 96 million euros Cristiano Ronaldo, halka sidoo kale Gareth Bale ay kula soo wareegtay 100 million euros, iyo 120 million euros oo ah Eden Hazard.
Haddii ay dhacdo in madaxweynaha kooxda Real Madrid ee Florentino Pérez uu go’aamiyo heshiiskan, Kylian Mbappé ayaa wuxuu noqon doonaa heshiiskii ugu qaalisanaa taariikhda ee naadiga Los Blancos.